Ebe nrụọrụ weebụ nke map ndị dị na mbụ n'etiti Mpịakọta Maapụ 28-124
N'ime mbipụta ya kachasị ọhụrụ, mpịakọta 28 -n 'maka ọnwa nke Machị na Eprel 2019-, Mapping magazine setịpụrụ dị ka isi okwu ya, ihe niile metụtara IX Iberian Conference on Spatial Data Infrastructures. N'ime nhọrọ nke edemede sayensị asaa, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ a nke dị mkpa maka ọmụmụ ihe banyere ala, ...
Na-amalite nzọụkwụ siri ike na 2019 World Geospatial Forum na Amsterdam
Eprel 2, 2019, Amsterdam: Global Geospatial Forum (GWF) 2019, ihe omume kachasị atụ anya maka obodo geospatial zuru ụwa ọnụ, bidoro ụnyaahụ na Taets Art & Event Park dị na Amsterdam-ZNSTD. Ihe omume malitere na ihe karịrị ndị nnọchiteanya 1,000 sitere na mba 75 na-agbakọta iji gbanwere ihe ọmụma banyere otu ọ si bụrụ ebe niile ...
Magazin Geomatics - Afọ 40 - 5 Afọ
Na 2013 anyị kewapụtara akwụkwọ akụkọ ewepụtara maka ubi nke geomatics, na-eji ogo ogo ha dị ka ntụnye aka. 5 afọ mgbe e mesịrị anyị mere mmelite. Dịka anyị kwuru na mbụ, akwụkwọ akụkọ geomatics ejirila nwayọ wee nwee usoro sayensị nke nkọwa ya dabere nke ukwuu na nka na ụzụ ...
A mara ọkwa 2019 Geospatial World Leadership na ọkwa GWF
Machị 26, 2019: Geospatial Media na Communications ekwuputala ndị meriri na nturu ugo World Leadership award 2019, bụ nke ezubere ikele ndị isi nke ụlọ ọrụ geospatial bụ ndị webatara ọhụụ na mpaghara ọrụ ha ma metụta ahịa dị ugbu a . Ndi hoputara ndi ahoputara site na ndi oka ikpe ...
#GeospatialByDefault - Nzukọ Geospatial 2019
Na Eprel 2, 3 na 4 nke afọ a, ndị isi gbara ọkpụrụkpụ na teknụzụ gbasara mbara igwe ga-ezukọ na Amsterdam. Anyị na-ezo aka na mmemme zuru ụwa ọnụ nke na-eme na ụbọchị 3, nke emere na afọ ndị na-adịbeghị anya, nke a na-akpọ Geospatial World Forum 2019, usoro ikpo okwu ebe ndị isi nọ n'ọhịa ...
4 Atụmatụ iji nwee ihe ịga nke ọma na Twitter - Top40 Geospatial September 2015
Twitter dị ebe a ka ọ nọrọ, ọkachasị ịdabere na byntanetị site n'aka ndị ọrụ na-eme kwa ụbọchị. Echere na site na 2020 80% nke ndị ọrụ ga-ejikọ na fromntanetị site na ngwaọrụ mkpanaka. Ala gị adịghị mkpa, ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha, onye ndụmọdụ, onye ngosi, onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye nwe onwe gị, otu ụbọchị ị nwere ike ịkwa ụta ọ bụghị ...
Geospatial - GIS, Internet na Blogs
GIM International Español, na-aga n'ihu na-aga nke ọma
Anatawo m mbipụta nke mbụ a nkeji iri na ise nke 2015, na maa bara uru nke ukwuu n'asụsụ Spanish. Isiokwu ndị ahụ na-agwa uru ndị ha na ha na-arụ ọrụ na-anọchi anya: Oge ọhụrụ n'ọchịchị ala na-apụta. Nke a bụ nnukwu edemede ebe Chrit Lemmen na ndị ọrụ ibe atọ ndị ọzọ na-ekwu okwu ka ...
Ihe mere Top40 Geospatial na Twitter
Ọnwa isii gara aga, anyị mere nyochaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri anọ na akaụntụ twitter, n'ime ndepụta anyị na-akpọ Top40. Taa, anyị na-eme mmelite na ndepụta a, iji hụ ihe mere n’agbata Mee 22 na ngwụcha Disemba 22, 2014. N'ime ha niile, iri na otu dị n’asụsụ bekee, abụọ n’asụsụ Portuguese na ndị ọzọ ...
Twitter abịa iji dochie ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị na-eme site na faili ntanetị. O juru ajuju ihe kpatara nke a, mana ikekwe otu ihe kpatara ya bu na oru oma nke imebi ozi site na ekwenti ma nwekwaa ike ibanye na ndeputa ndi hapuru ihe ndi n’achoghi. Na…
eGeomate Magazines My egeomates
Geospatial - GIS, Internet na Blogs, My egeomates
GIM International. Mbipụta mbụ na Spanish
Akwụkwọ bụ Global Geomatics Register, GIM International na-ebute mbipụta mbụ ya n'asụsụ Spanish, nke ga-apụta ugboro atọ n'afọ.
Urban Social Maps, akwụkwọ mara mma
Naanị mgbe anyị nọ n'oge mgbe ezigbo nkwado nke mba niile maka mmepe na mbọ nke mba ọ bụla iji hazie atụmatụ ya iji melite ndụ ụmụ amaala ga-abụ ihe a na-enyo enyo, mbipụta nke abụọ abịarute, nke gụnyere a CD nke ngwa nke akwukwo Maps ...
Olee otú ụwa map na 1922
Akwụkwọ akụkọ National Geographic ọhụrụ a na-eweta isiokwu abụọ nwere nnukwu mmasị: N'otu aka, akụkọ buru ibu banyere usoro ịme ihe nketa site na iji sistemu laser. Nke a bụ ihe onye nchịkọta, nke na-akọwa mgbagwoju anya nke ọrụ na ihu Ugwu Rushmore na South Dakota ...
Cartografia, Politics na Democracy
Geomatics Magazines - Top 40 Ranknye ọkwa
Akwụkwọ akụkọ geomatics ejirila nwayọọ nwayọọ gbanwee na ụda nke sayensị nke nkọwa ya dabere na ọganihu nke teknụzụ yana njikọta nke ọzụzụ gburugburu sayensị ụwa. Omume ndị dị ugbu a gburu akụkọ ndị e bipụtara na ogologo akụkọ ihe mere eme, weghachite isiokwu kachasị mkpa nke mbipụta ndị ọzọ wee mechie ...
Akụziri CAD / GIS, Apụta, Geospatial - GIS
MundoGEO # Jikọọ na-ekwupụta ndị ikpeazụ nke onyinye 2013
MundoGEO # Jikọọ ekwuputala mmeghe nke agba nke abụọ nke onyinye ahụ nke na-amata ndị kacha mma nke ụlọ ọrụ geospatial ka ị nwee ike ịme ntuli maka otu n'ime mmadụ ise ikpeazụ na ngalaba nke ọ bụla. N'ime ọnwa Eprel, ndị obodo gosipụtara n'ụzọ doro anya ndị kwesịrị ịbụ ndị ikpeazụ na ngalaba nke ọ bụla. Ugbu a, mmadụ ise kachasị tozuru oke ...